टोपबहादुर रायमाझी उर्जा मन्त्री बनेपछि झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती जान थाल्यो ! - Samajbad
टोपबहादुर रायमाझी उर्जा मन्त्री बनेपछि झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती जान थाल्यो !
in अन्तर्राष्ट्रिय, अर्थ / पर्यटन, प्रदेश, राजनीति, विशेष
काठमाडौं : पुस १५, केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पूनर्गठन गरेपछि नेपालमा फेरि लोडसेडिङ हुने हो कि भन्ने आम चिन्ता बढेको छ । टोपबहादुर रायमाझीले उर्जा मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछी काठमाडौमा बत्ति झ्याप्प झ्याप्प जान थलेको छ ।जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरेपछि दैनिक १८ घन्टे लोडसेडिङ अप्रत्यासित रुपमा अन्त्य भएको थियो । जबकि अहिलेका उर्जा मन्त्री रायमाझीले उर्जा मन्त्रालय सम्हल्दा दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो । विद्युतको लोड व्यवस्थापनमा कुशल देखिएका घिसिङलाई एक कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्ने सडकका मान्छेको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै ओली सरकारले पाखा लगाएपछि फेरि लोडसेडिङको आतंक शुरु हुने चिन्ता बढेको थियो। नभन्दै तालिका नै बनाएर लोडसेडिङ घोषणा नगरेपनि पछिल्लो समय बिजुली झ्याप्प-झ्याप्प जान थालेको छ। कतै यो लोडसेडिङको पूर्वअभ्यास त होइन ? अहिले आम मान्छेमा त्रास फैलिएको छ ।
अहिले झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती जानुको कारण प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय कमजोरी नै मुख्य जिम्मेवार रहेको जानकारहरुको भनाइ छ । गत बर्ष काठमाडौँमा विद्युत अधिकतम माग ४२४ मेगावाट थियो, यस वर्ष जम्मा ३३६ छ। विद्युतको खपत बढेको छैन बरु घटेको छ तर मन्त्री र प्रबन्ध निर्देशकको परिवर्तन पछि बत्ती झ्याप्प झ्याप्प जान थालेको विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।
उर्जा क्षेत्रका जानकारहरु पनि गत वर्षभन्दा यसवर्ष माग घटेको बताउँछन् । कोरोना र लकडाउनका कारण विद्युतको माग घटेको उनीहरुको भनाइ छ। प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने कहिलेकाही बत्ती जाँदैमा त्यसलाई लोडसेडिङ भएको भन्न नमिल्ने बताउछन् ।
कोरोनाविरुद्धको चिनियाँ खोप ८० प्रतिशत प्रभावकारी
बर्ष २०२० लाई फर्केर हेर्दा : सैन्य शिविरमा इरानी मिसाइल हमलापछि मैदान छोडेर अमेरिका भागेको त्यो दिन